लालबाबु पंण्डितको मन्त्रालय हेरफेर होला ? पंण्डितकी श्रीमतिको यस्तो अपेक्षा हेर्नुहोस अन्तरवार्ता – SawalNepal
लालबाबु पंण्डितको मन्त्रालय हेरफेर होला ? पंण्डितकी श्रीमतिको यस्तो अपेक्षा हेर्नुहोस अन्तरवार्ता
By सवालनेपाल	 प्रकाशित समय २०७४, ६ फाल्गुन आईतवार ११:११
भनिन्छ, एक सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ । र, हो पनि । कति नेता, मन्त्री आफ्नै पत्नीका कारण काम गर्न सक्दैनन् । मन्त्रीनीको रवाफ, परिवारवाद हावी, अनुचित दबाबमा आफ्ना आफन्तबाट राज्यकोष दोहन गराउने कार्यमा संलग्न गरे भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
एमाले र माओवादीबीच आज पार्टी एकता बैठक, के होला निर्णय?
माओबादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता बने प्रचण्ड
बिर्तामोडमा तनाव ! बन्दमा उत्रनेहरु पक्राउ (भिडियो सहित)
प्रदेश १ का मन्त्री इन्द्र आङ्बो कमाइ माध्यम यस्तो